Pyae Phyo (MMiTD): August 2016
Android ဖုန်းနှင့် Tablet တွေမှာအသုံးများတဲ့ - Viber Version 6.2.1.84 APK
ဒီနေ့တွက်လာ Android ဖုန်း tablet တွေအသုံးများနေတဲ့ Viber Version သစ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဒီနေ့ထွက်တာပဲရှိသေပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ဘာဖြစ်ဆိုတော့ Viber ဆိုတာ Online ရတာနှင့် Free call တိုင်းတပါးသို့ရောက်နေသော အမေအဖေတွေကို free call,free Chatting and free တိုင်းတပါးသို့ေ၇ာက်နေသော သူကိုတွေကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ချစ်စရာ အရုပ်ကလေးတွေ ပါလာတာကိုတွေ၇ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Update OR Version new သုံးချင်းသူများအတွက် အောင်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
♪ Android ဖုန်းတစ်လုံးကို Firmware ပြန်တင်တော့မယ်ဆိုရင် ♫
Android ဖုန်းတစ်လုံးကို Firmware ပြန်တင်တော့မယ်ဆိုရင် အရေးကြီးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အဆင်ပြေတဲ့အခါရှိသလို အဆင်မပြေတဲ့အခါကျရင်အရမ်းကိုစိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Android
ဖုန်းတစ်လုံးကို Firmware ပြန်တင်တော့မယ်ဆိုရင် သတိထားစရာလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တွေ ဘာတံဆိပ်ကြည့်တယ်။ ဘာ model ဆိုတာ ကြည့်တယ်။နောက် computer ထဲမှာ firmware တွေ့ရင် ကောက်တင်ပလိုက်တာပဲတစ်ချို့ကြ မရင်ငယ် လေးနဲ့ backup ဆွဲထားတယ်။ တစ်ချို့ကြ uboot ကလေး ချန်ရေးတယ်။ တစ်ချို့ကြတော့ တော်တော်နပ်တဲ့လူဆို system တစ်ဖိုင်ပဲရေးတယ်။ အမှန်က စနစ်တစ်ကျလေးဖြစ်သင့်တယ်။ firmware တင်လိုက်တယ်။
vibrate ပဲ တုန်တော့တယ် / display ဖွေးသွားတယ် / touch ဆွဲ မရတော့ဘူး / sim တစ်ကဒ် မသိတော့ဘူး။ error တွေအများကြီးပေါ့။ ဒါကြောင့် မတင်ခင် သေချာအောင် လုပ်သင့်တယ်မဟုတ်ရင် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်က တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် စိတ်ဆက်တဲ့ ဆရာတွေဆို customer နဲ့ ရိုက်ပေါက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါတွေ မဖြစ်ရအောင်
ဖုန်းတစ်လုံး logo လည်နေလို့ဖြစ်စေ / virus ကိုက်နေလို့ဖြစ်စေ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ဆိုင် ပြင်ဖို့လာပြီဆို ဖုန်းကို adb သိအောင်လုပ်ပါ။
recovery mode ကနေချိတ်ပါ။
AT mode ကနေချိတ်ပါ။
META mode ကနေ ချိတ်ပါ။
(အဲ့တာတော့ နောက် post တစ်ခုရေးပေးပါမယ်)
ပြီးရင် အောက်ပါ command လေးရိုက်ပါ။
adb pull /system/build.prop rename.prop
ဒါဆိုအကိုတို့ adb folder လေးထဲမှာ system အောက်က buil.prop လေးရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ရောက်နေတဲ့ build.prop လေးကို note ++ ကလေးနဲ့ဖွင့်ပါ။
utc date နေရာက ဂဏန်းတွေကို မှတ်ထားပါ။
ဒါက ဖုန်းထဲကနေ adb သိအောင်လုပ်ပြီး build.prop ထဲကမူလ utc dateကိုဆွဲထုတ်ကြည့်ထားတာပါ။
ပြီးရင် ကိုယ့် computer ထဲမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ရေးမဲ့ firmwareထဲက system ကို
romhelper / ext4 unpatcher/ system unpack/repack/
system ကိုဖြည်ချတဲ့ tool တစ်ခုခုနဲ့ ဖြည်ချပြီး build.prop ထဲက utc date ကို ခုနက ဖုန်းထဲကနေဆွဲထုတ်ထားတဲ့ utcdate နဲ့ နံပါတ်တွေတူမတူကြည့်ပါ။ တူရင် firmware တင်ပါ။ မတူရင် မတင်ပါနဲ့။ ဒါဆို display ဖွေးမဖွေး , touch ရ / မရ ကျနော်တို့ သေချာပေါက် သိပါပြီ။
utc date မယ်ဆိုရင် model မတူရင်တောင် တင်လို့ရပါတယ်။ universal firmware ဆိုတာ
utc date တူတာတွေကိုစစ်ချပြီး သက်မှတ်ထားတာပါ။ qualcomm ဖုန်းတွေမှာဆို ဟိုးအောက်နားက
ro.confg.hw_systemversion=C8816V100R001C92B180_SYSTEM အဲ့ဒီ့နေရာကိုကြည့်ပါ။ c92B180 ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ c92Bက region ပါ။ 180က build number ပါ။ systemversion တူတယ်ဆိုတင်ပါ။
မတူရင်မတင်ပါနဲ့ ဒါဆို လိုင်းမတက်တာ brick ဖြစ်တာတွေ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ၀ါသနာ ပါတယ်ဆိုလုပ်ကြည့်ပါ။
credit – Ko Myo Ko Ko Zaw
အမျိုးအစား: Android Firmware တင်နည်း , Firmwares , Mobile Knowledge , နည်းလမ်းများ
♪ Smart Phone များကိုအတုအစစ် အလွယ်ကူဆုံးခွဲခြားနိုင်ရန် ♫
Android ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် iOS ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် အတုနဲ့အစစ်ကိုအလွယ်ကူဆုံး
ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ smart phone တွေမှာအတုထွက်လာတွေကလည်း တော်တော်လေးခွဲခြားရခက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့
အမှန်အကန်ခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်တော့မဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းရဲ့ IMEI နံပါတ်ကိုယူပါ။
ဖုန်းကနေ IMEI နံပါတ်ဖော်ကြည့်ရန် code – *#06#
ဒါ့အပြင်ဖုန်းရဲ့ battery အနောက်မှာလည်း imei နံပါတ်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
battery အသေဖုန်းတွေကတော့ battery ပေါ်မှာကပ်ထားပါတယ်။
IMEI ကိုမှတ်ထားပြီးရင်တော့ အောက်ကလင့်ကိုဝင်လိုက်ပါ။
အဲဒီလင့်မှာပါတဲ့ Enter IMEI ဆိုတဲ့အကွက်လေးထဲကို မှတ်ထားတဲ့
မိမိဖုန်းရဲ့ IMEI နံပါတ်ကိုထည့်သွင်းပါ။ IMEI နံပါတ်ထည့်ပြီးရင်တော့
CHECK ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ information about your phone ဆိုပြီး
ပေါ်လာပါမယ်။ သင့်ဖုန်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ကျလာပါမယ်။
ကိုယ်စစ်လိုက်တဲ့ဖုန်းက Samsung Galaxy Note7ပဲဆိုပါစို့
information about your phone ဆိုတဲ့နေရာမှာ Galaxy Note 7
ပေါ်လာရမဲ့အစား Nokia တို့ဘာတို့ အခြား model များပေါ်လာပါက
ကိုယ်စစ်လိုက်တဲ့ဖုန်းဟာ အတု ( Clone ) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်ကွေး၂ခုပါတဲ့အတွက်အလုပ်တွေပိုလုပ်နိုင်ပြီပေါ့။ပိုလည်း မြန်လာ ပါပြီ။SPenကိုသုံးနေရင်း၅.၇လက်မအရွယ်Note ကိုသင့်လက်ထဲမှာ သက်သောင့်သက်သာကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။S Pen ရေးတဲ့ပုံစံ၊အလုပ်လုပ်တဲ့ ပုံစံကိုပြောင်းထားပါတယ်။မှတ်စုများရေးခြင်း၊အိုင်ဒီယာများမှတ်သားခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြတဲ့အတွက် တကယ့်ဘောပင်တစ်ခုနဲ့တူအောင်ပြုလုပ်ထား ပါတယ်။ရေစိုမှာလည်းစိတ်ပူဖို့မလိုတော့ပါဘူး။လှုပ်ရှားသက်ဝင်တဲ့GIF များကိုလည်းS Pen ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံများကို ရွေးချယ်ပေး လိုက်ရုံပါပဲ။လူမှုကွန်ရက်များမှာGIF များကိုသူငယ်ချင်းများနဲ့မျှဝေနိုင် ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများ၊စာသားများ၊Web စာမျက်နှာများရဲ့အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး မြားထိုး၍လည်းမျှဝေနိုင်ပါတယ်။Air Command ကနေSmart Select ကိုသုံးရမှာပါ။ S Pen ကိုလည်းရေစိုခံနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထား ပါတယ်။
<Same Camera as the Galaxy S7>
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကGalaxy S7ရဲ့ကောင်းမွန်ပြည့်စုံလှတဲ့ကင်မရာ အတွေ့အကြုံတွေကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုNote7မှာဆိုရင်လည်းSamsung ဟာGalaxy S7 မှာပါဝင်တဲ့ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊Feature တွေကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးလာခဲ့ပါပြီ။16 MP Sensor နဲ့ကင်မရာဟာ Professional ကင်မရာတစ်လုံးလောက်နီးနီးကိုအသုံးဝင်နေစေမှာဖြစ်ပြီး၊ ထိမိသပ်ရပ်တဲ့ပုံတွေရရှိနိုင်စေဖို့အတွက်pixel ကလည်း မြင့်မားဦးမှာပါ။OIS ထောက်ပံ့မှုပါဝင်နေမှာဖြစ်ပြီး၊အလင်းရောင်အားအနည်းဆုံးအချိန် မှာတောင်မှ မြင်ကွင်းကြည်လင်တဲ့ပုံတွေကိုရရှိနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ မဆိုကင်မရာရိုက်ကူးနိုင်စေဖို့အတွက်Home Button ပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက် တာနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုအပိုင်းမှာ အမြဲတမ်းရှေ့တန်းရောက်နေစေမှာပါ။ကင်မရာရဲ့Software ထောက်ပံ့မှု အပိုင်းမှာလည်းGalaxy S7 ထက်အနည်းငယ်ပိုသာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကိုတောင် မြင်တွေ့ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။Pro Mode ကိုသာသုံးစွဲရိုက်ကူး မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတာ၊ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အချိန်တွေမှာမြင့်မားတဲ့ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊Shutter Speed ကလည်းသွက်လက် မြန်ဆန်စွာလှုပ်ရှားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ပိုမိုတောက်ပတဲ့F1.7 Lens နဲ့ပိုမို ကြီးမားတဲ့1.4µm Pixels တပ်ဆင်ထားတဲ့12MP Dual Pixel Sensor ဟာ နေရာမရွေးအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။Dual Shot ရိုက်ကူးမှုဟာသင့်အတွက်ပုံရိပ်ကောင်းတွေကိုအချိန်ပိုင်းအတွင်းဖမ်းယူနိုင် မှာဖြစ်ပြီး၊HD ဗီဒီယိုနဲ့Image တွေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖမ်းယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်2160pအရည်အသွေးကို30fpsနဲ့ရိုက်ကူးနိုင် မှာဖြစ်ပြီး၊1080pကိုတော့60fps နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
<One Handed Usability Options>
Samsung သုံးစွဲသူတွေအတွက်One Handed လုပ်ဆောင်ချက်ကိုGalaxy Note ဖုန်းတွေမှာဦးစားပေးထည့်သွင်းလာခဲ့ပါပြီ။သင့်အနေနဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို သုံးစွဲတဲ့အချိန်မှာကျယ်ပြန့်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆိုရင်လွယ်ကူစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့Screen Size ကိုချုံ့ပစ် လိုက်တာမျိုးကို ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။Home Button ပေါ်မှာသုံးချက်ဆင့်နှိပ် လိုက်တာနဲ့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့One Handed Mode ကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ သင့်တော်တဲ့Window တစ်ခုချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။Screen ရဲ့ဘယ်ဘက်လား၊ ညာဘက်လားဆိုတာကတော့သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အချိန်၊Samsung Keyboard သုံးစွဲတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းခေါ်တဲ့Button ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားချင်တဲ့အချိန်တွေမှာလွယ်ကူစွာသုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာပြင်အပြည့်ကိုပြန်သွားချင်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်ကူပြီးတော့Note5ဟာသင်စိတ်ကြိုက်ချယ်လှယ်နိုင်မယ့်အသေးစားကွန်ပျူတာတစ်လုံးအဖြစ် စွမ်းဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အဓိကအကျဆုံးနဲ့ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေအတွက် RAM ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတဖြည်းဖြည်း မြင့်မားလာခဲ့ပါပြီ။မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ် သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေမှာ4GB RAM ထည့်သွင်းဖို့သာစဉ်းစားလာခဲ့ပါ တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဖြစ်စေ၊သင့်ရဲ့အပန်းဖြေနေချိန်မှာဖြစ်စေ၊ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေရှာဖွေစုဆောင်းမယ်၊ဂိမ်းတွေဆော့ကစားမယ် ဆိုရင်သွက်လက်မြန်ဆန်တဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်4GB RAM က စွမ်းဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။Appတွေကိုတစ်ခုထက်မကဖွင့်ထားနိုင်ပြီး၊ ဂိမ်းဆော့ကစားနေရင်းနဲ့မိမိသုံးစွဲချင်တဲ့App တစ်ခုကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သွက်လက်မြန်ဆန်စွာပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအနာဂတ်စမတ်ဖုန်း လောကအတွက်တော့ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုထားသလိုပါပဲ။ပိုကြီးလာတယ်ဒါမှ မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့App တွေကိုအပြည့်အ၀သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ အမြဲတမ်း လည်းUpdate ပြုလုပ်နိုင်စေမှာပါ။သေချာတာကတော့သင်ကိုင်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းဟာတစ်နှစ်၊နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတောင်လုံလောက်တဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွေကိုရရှိနေစေမှာဖြစ်ပါ တယ်။Galaxy Note7ရဲ့ဘက်ထရီဟာ ဖြုတ်တပ် ပြုလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းအားသွင်းတာမြန်ဆန်တဲ့နည်းပညာတွေ ကိုသုံးစွဲထားပါတယ်။အလုပ်များများလုပ်ဖို့နဲ့ဂိမ်းများများကစားဖို့အတွက်ပါဝါ များများလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်Galaxy Note7 မှာသူ့ယခင်Note ထက် အရွယ်ပမာဏပိုမိုကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။အရွယ် ပမာဏပိုမိုကြီးမားပေမယ့်အားသွင်းရာမှာတော့လျင်မြန်မှုကျဆင်းသွားခြင်း မရှိပါဘူး။
<You Can See More>
ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ပုံရိပ်အရည်အသွေးတွေကို မြင်တွေ့နိုင်စွမ်းရှိဖို့ 2560×1440 resolution ကစွမ်းဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ပုံရိပ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ တိကျတဲ့ရုပ်ထွက်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်ဖန်သားပြင်ရဲ့သိပ်သည်းဆကလည်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်Note7 မှာ518ppi ဖြစ်ပြီး၊ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာ၊ဂိမ်းတွေဆော့ကစားတာတွေကိုကြည်လင်စွာ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Icon တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုတာ၊စာသား မက်ဆေ့တွေ ပို့တဲ့အခါမှာလည်းမျက်နှာပြင်ဟာမျက်စိရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းကိုအနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေဖို့ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။၅.၇လက်မမျက်နှာပြင်ဟာကျယ်ပြန့် ကြီးမားတယ်လို့ဆိုရုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက် တွေအတွက်လည်းထောက်ပံ့ မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေဦးမှာပါ။Gmail တွေ ဖွင့်လှစ်ကြည့်ရှုမယ်၊Hangout လိုAppတွေသုံးစွဲတဲ့အခါမှာသင့်အနေနဲ့ မက်ဆေ့တွေကိုကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရေးကြီးတဲ့ဖုန်းအဆက်အသွယ်တွေ ကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလည်း မြန်ဆန်စွာသုံးစွဲ နိုင်စေဖို့လိုပါတယ်။Fingerprint Sensor သုံးစွဲမှုဟာGalaxy S6 မှာကတည်းက အဆင့်မြှင့်တင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊Note7 ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဟာရိုးရှင်းတဲ့ ထိတွေ့မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ပဲမိမိဖုန်းကိုဖွင့်လှစ်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းတွေကိုမှတ်သားသိရှိမှုအပိုင်းမှာအချက်အလက်တွေကိုပိုမိုစုစည်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊သင်ကြိုက် တဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သင့်အတွက်အခြားလူတွေမသိစေချင် တဲ့အချက်အလက် တွေအတွက်ကတော့Private Mode ကအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနဲ့Application ပိုင်းအတွက်ကတော့အလုံခြုံဆုံးစနစ် ဖြစ်ပြီး၊ ထိန်းချုပ်ရတဲ့အခါမှာလွယ်ကူတဲ့KNOX ကအလုံးစုံကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ယခင်ကဆိုလျှင်ဖုန်းရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ဗွေရာကိုသာအဓိကထားထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သာမန်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့Pin, digit နည်းလမ်းတွေဟာဟက်ကာတွေရဲ့ထိုးနှက်မှုကို လွယ်လင့်တကူခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီနိုင်တဲ့လက်ဗွေစနစ်တွေကို သုံးပြီးတော့စမတ်ဖုန်းတွေကိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ် လာကြတာပါ။ဒါပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ လက်ဗွေရာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဖုန်းတွေအစားeye scanner ပြုလုပ်နိုင်မယ့် ဖုန်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့ကိုပိုအားသန်လာပါတယ်။အခုလည်းအနာဂတ်စမတ်ဖုန်းသစ်လို့ဆိုနိုင်မယ့်ZTE Grand S3,Vivo X5 Pro,Fujitsu NX တို့ကိုBiometric security နည်းပညာလို့ဆိုနိုင်တဲ့Eyeprint ID နည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်မယ့် ဖုန်းတွေအဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းတွေမှာထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့Eyeprintနည်းလမ်း ကလည်းဒီလိုလုံခြုံမှုတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အရှေ့ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာနဲ့ ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားသူရဲ့မျက်လုံးမှာရှိတဲ့ မျက်ကြောလေးတွေကိုScanning ပြုလုပ်ပြီးဖုန်းကိုunlock ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ဘက်မှာscan ပြုလုပ်ဖို့မျက်နှာအပေါ်ဘက် ပုံစံလေးနဲ့follow the target ဆိုတဲ့အကွက်လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်းဖုန်းကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရမ်းမြန်တဲ့အချိန်ဆို1.5sec လောက် ပဲကြာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်Pattern, Pin တို့ထက်လုံခြုံတဲ့နည်းလမ်းအပြင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအတွက်လည်းစိတ်ချရပါလိမ့်မယ်။ဆမ်ဆောင်းရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့Note 7မှာတောင်ဒီလိုနည်းပညာကိုသုံးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆမ်ဆောင်းမတိုင်ခင်တုန်းကထုတ်လုပ်ထားတဲ့Eyeprint ID သုံးဖုန်း (၃) မျိုး ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . ..
<ZTE Grand S3>
ZTE အနေနှင့်အခြားဖုန်းတွေနဲ့မတူညီတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်မယ့်နည်းလမ်း ကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုတောက်လျှောက်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။အခုလည်း အနာဂတ်စမတ်ဖုန်းသစ်လို့ဆိုနိုင်မယ့်Grand S3 ကို Biometric security နည်းပညာလို့ဆိုနိုင်တဲ့ Eyeprint ID နည်းလမ်းကို သုံးနိုင် မယ့်ဖုန်းကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ZTE Grand S3မှာမျက်နှာပြင်ပုံရိပ်ဖော်ပြမှု ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့်full HD(1080x1920)ကိုပေးစွမ်း ထားပါတယ်။Display ကတော့IPS LCD ဖြစ်ပြီး၊၅.၅လက်မမျက်နှာပြင်မှာ ပုံရိပ်တွေကိုအသေးစိတ်မြင်တွေ့နိုင်ဖို့401ppi နဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ZTE Grand S3ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာ16MP ကင်မရာကိုတပ်ဆင်ပေးထား ပါတယ်။ညအမှောင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေနဲ့အလင်းရောင်မှုန်ဝါးတဲ့နေရာ တွေမှာပုံရိပ်တွေပီသစွာ ရိုက်နိုင်စေဖို့အတွက်ကတော့dual-LED flash ကို ကင်မရာနဲ့ဘေးကပ်လျက်မှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။အရှေ့ဘက်ကင်မရာရဲ့နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့EyePrint ID ကိုသုံးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ Android 4.4.x(KitKat) ကိုသာထည့်သွင်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်အပေါ်ဘက်မှာwidget တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးနာရီ၊ ရာသီဥတု အခြေအနေတို့ကိုပြသပေးနေမှာပါ။App drawer လို လုပ်ဆောင်ချက် ကိုထည့်သွင်းပေးထားမှာမဟုတ်ဘဲ၊ZTE ကထည့်သွင်း ပေးထားတဲ့appတွေကိုတစ်နေရာတည်းကသုံးနိုင်စေဖို့အတွက်Folder တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။Appတွေရဲ့UI ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်ပြီး Setting,file manager တို့ကိုတော့Home screen ကနေ တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်မှာပါ။ZTE မှာSnapdragon 801 ပရိုဆက်ဆာကို သုံးစွဲနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။RAM ကတော့3GB DDR3 ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။2.5GHz အမြန်နှုန်းရှိမယ့်Quad-core ပရိုဆက်ဆာဟာဂိမ်းတွေကို မြန်ဆန်စွာ ဆော့ကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှု အတွက်ကတော့ Adreno 330 GPU တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။3100mAh ဘက်ထရီစွမ်းအား ကိုသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းကတော့Dual Sim GSM/CDMA ကွန်ရက်မှာသုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
<Vivo X5 Pro>
တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့vivo ဟာလူတစ်ကိုယ်လုံးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့မျက်စိနဲ့မှတ်မိသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့eye-scanner နည်းပညာသုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးX5 Pro ကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။vivo အနေနဲ့X-series ဖုန်းတွေကိုသူမတူတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေထည့်သွင်းထုတ်လုပ်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ပုံရိပ်ဖော်ပြမှုကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့်full HD (1080x 1920)ကိုပေးစွမ်းထားပါတယ်။Display ကတော့Super AMOLED ဖြစ်ပြီး၅.၂လက်မမျက်နှာပြင်မှာပုံရိပ်တွေကိုအသေးစိတ်မြင်တွေ့နိုင်ဖို့424ppiနဲ့ထောက်ပံ့ပေး ထားပါတယ်။Android 5.0 ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့် 2.1UI ကိုသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကင်မရာဟာ13MP ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံ တွေရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်4128 × 3096p အရည်အသွေးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးHDR mode သုံးပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စိုပြည်ပြီးအရောင်စိုတဲ့ပုံတွေကို ရပါလိမ့် မယ်။ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့2160p@30fps ရရှိနိုင်မှာပါ။အရှေ့ဘက် ကင်မရာအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့interpolate ထပ်တိုးနည်းပညာကို လည်းခံစားရရှိဦးမှာပါ။Vivo X5 Pro မှာOcta-core 64bit ပရိုဆက်ဆာကို သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။RAMကတော့2GB ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Snapdragon 615 ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကတော့1.5GHz Cortex-A53 Quad-Core နဲ့1.0GHz Cortex-A53 Quad-core တို့ပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားချိတ်ဆက်မှုတွေအနေနဲ့Micro -USB 2.0,USB host ၊ကီးဘုတ်၊mouse တွေကိုချိတ်ဆက်သုံးနိုင်တဲ့အပြင်USB stick တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့USB OTG စနစ်ကိုသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
<Fujitsu Arrows NX>
အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းတွေကိုထုတ်လုပ်လာတဲ့ပုံစံဟာတဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ဒီလို ထုတ်လုပ်သူတွေထဲမှာတရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေကရှေ့တန်းကဦးဆောင်နေတယ်လို့ထင်ရပါ တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာနောက်ဆုံးပေါ်ပါဆိုတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကိုပေါင်းထည့်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။အခုဆိုရင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေလည်းအကောင်းဆုံးပါဆိုတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ထည့်သွင်းပြီးထုတ်လုပ်လာကြပါပြီ။ဂျပန်ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုဖြစ်တဲ့fujitsuနဲ့docomoတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ် ထားတဲ့arrows NX ပဲဖြစ် ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လိုက်တဲ့ဖုန်းလေးမှာဘယ်လိုထူးခြား ချက်တွေထည့်သွင်းပေးထားလဲဆိုတော့Iris Passport ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပြီးဖုန်းရဲ့screen ကိုlogin ပြုလုပ်နိုင်မှာ ပါ။Login ၀င်ရောက်မှုအတွက်ဘယ်၊ညာမျက်လုံးနှစ်လုံးထောက်ပံ့ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Arrow NX မှာမျက်နှာပြင်ပုံရိပ်ဖော်ပြမှုကိုအကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့်1440 × 2560 ကိုပေးစွမ်းထားပါတယ်။Display ကတော့IPS display ဖြစ်ပြီး၅.၂လက်မမျက်နှာပြင်မှာပုံရိပ်တွေကို အသေးစိတ် မြင်တွေ့နိုင်ဖို့565ppi နဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
အဓိကကင်မရာဟာ20MP ဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်5248 × 3936pအရည်အသွေးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးHDR mode သုံးပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင် တော့စိုပြည်ပြီးအရောင်စိုတဲ့ပုံတွေကိုရပါလိမ့်မယ်။video ရိုက်မယ်ဆိုရင် တော့2160p@30fps ရရှိနိုင်မှာပါ။ မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးလိုသူ တွေအတွက်ကတော့Panorama သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အုပ်စုလိုက်selfieရိုက်ကူးလိုသူတွေအတွက်ကတော့2MP ကင်မရာကို သုံးစွဲ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး (သို့) မိုဘိုင်းdevice တစ်ခုအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုလွယ်လင့်တကူနေရာဒေသမရွေးသုံးစွဲနိုင်စေ အောင်ကူညီပေးမှာကတော့သူ့မှာ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့Hardware ပါပဲ။Arrows NX မှာOcta-core 64bit ပရိုဆက်ဆာကိုသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။RAMကတော့3GB ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။Snapdragon 810 ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုကတော့2.0GHz Cortex-A57 Quad-Core နဲ့1.5GHz Cortex-A53 Quad-core တို့ပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ကလတ်တလောထွက်ရှိထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိ တဲ့32GBပဲဖြစ်ပြီးတော့128GBကိုSD card ကနေ တိုးမြှင့်နိုင်မှာပါ။3120mAh ဘက်ထရီစွမ်းအားကိုသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဆက်တိုက်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းနဲ့အသင့်အနေအထားအချိန်ကိုတော့တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းကတော့နောက်ဆုံး ပေါ်ဖုန်းဖြစ်မှုနဲ့အတူ4G LTE ကွန်ရက်မှာသုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။Octa-Core ပရိုဆက်ဆာကိုမောင်းနှင်သုံးစွဲနိုင်မယ့်ဘက်ထရီမျိုးဖြစ်တာကြောင့်အချိန် တာရှည်ခံမှုတော့ရှိမှာပါ။ဘက်ထရီကိုတော့ ဖြုတ်တပ်ပြုလုပ်လုိ့မရနိုင်ပါဘူး။ နောက်ထပ်သူ့မှာလုပ်ဆောင် ချက်အသစ်တွေထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့အကြမ်းခံနိုင်စွမ်းနဲ့ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းအတွက်စံနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့IP58,IP6X တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းပါ။
LG မှအသစ်ထုတ်လုပ်ထားသော LG G5 SE ကို G5 Life လို့လည်းခေါ်ဆို နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အရွယ် အစားပမာဏကတော့ 149.4×73.9×7.3mm ဖြစ်ကာ အလေးချိန်မှာ 156g ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းကတ်တစ်ကတ်သုံးနဲ့ နှစ်ကတ် သုံးဆိုပြီး အမျိုးအစားကွဲပြားပါတယ်။ CPU Chipset ကို Qualcomm Snapdragon 652 chipset ကို အသုံးပြုထားပြီး မြန်နှုန်းကတော့ Octa Core 1.8 GHz ရှိပြီး Screen Size ကတော့ ၅.၃ လက်မရှိပြီး မြင်ကွင်းစွမ်းရည် အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားသော Pixels ပမာဏကတော့ 2560 × 1440 ဖြစ်ပြီး တစ်လက်မမှာရှိမယ့် Pixel ပမာဏသိပ်သည်းဆကတော့ 554 ppi ပါ။
အကြမ်းခံသောဖုန်းမျက်နှာပြင် ဖြစ်စေဖို့ အတွက်လည်း Gorilla Glass4ဖုံးအုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။ Camera အနေနဲ့လည်း သုံးစွဲသူတွေ နှစ်ခြိုက် လောက်တဲ့ ပမာဏရှိသော Dual Camera Rear Camera 16 MP နဲ့ 8MP Camera နှစ်လုံး ပေါင်းစပ်မှု ကြောင့် မြင်ကွင်းပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ (wide view) 135° အထိ လှပသောမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး front 8MP ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Selfie သမားများအတွက်လည်း စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိ မှာပါ။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်မှုစွမ်းရည်မှာ 2160p နှင့် 1080p ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ OS အနေနဲ့ကလည်း android version ဖြစ်သော Marshmallow ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Update ...update ဆိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။
WIFI အနေနဲ့လည်း အမြန်ဆုံး ဆွဲအားနဲ့ နောက်ဆုံးနည်းပညာ 'AC' ကို အသုံးပြုထားပြီး Bluetooth 4.2 နဲ့ NFC, USB 2.0 ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး USB 3.0 ကိုလည်း supporting ပေးနိုင်ပြီး ထူးခြားချက်အနေနဲ့ USB Type C ကို အသုံးပြုထား ပါတယ်။ နှစ်သက်စရာ RAM3GB နှင့် ROM storage build in 32 GB ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Battery ကို ဖြုတ်တပ်လွယ်ကူ အဆင်ပြေ သော 2,800mAh ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ထိုဘက်ထရီဟာ 3G Network တွင် အသင့်အနေ အထား၌ 380 နာရီနီးပါးနှင့် စကားပြောဆိုဖို့အတွက် နာရီ ၂၀နီးပါးခံနိုင်စွမ်းရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါမယ်။ အားသွင်းမြန်ဆန်သော စနစ်လည်းပါရှိပြီး Quick Charge 3.0 ဟာ မိနစ် ၃၀ အားသွင်းရုံဖြင့် 83% အားပြည့် စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dual SIM နှစ်ခုစလုံးက nano sim ဖြစ်ပြီး 4G supporting ကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာစာစနစ် Zawgyi ရော၊ Unicode ရော နှစ်သက်ရာပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါ တယ်။ Security ပိုင်းအနေနဲ့လည်း Finger Print Sensor ကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ Active noise cancellation with dedicated mic စနစ်လည်းပါရှိပါတယ်။ လှပသောအရောင် ကွဲများလည်း ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Processor - QC 1.8 GHz & QC 1.2 GHz
Screen - 5.3 inches
Camera - 16 MP + 8 MP
♪ “iPhone5နှင့်အထက် အသုံးပြုသူများ အူရီဒူး 4G ကွန်ရက် တရားဝင် အသုံးပြုနိုင်” ♫
ပြည်တွင်းရှိ iPhone5နှင့် အထက်အဆင့်မြင့် iPhone အသုံးပြုသူများ အားလုံးအနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အူရီဒူး 4G ကွန်ရက်အသုံးပြုခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း အူရီဒူးမြန်မာမှ သတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။ Apple မှ အူရီဒူး မြန်မာ၏ 4G ကွန်ရက်ကို သေချာစွာလေ့လာ ဆန်းစစ်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် နောက်ထပ် အဆင့် မြှင့်ပေးမည့် iOS Update တွင် အူရီဒူးမြန်မာ၏ 4G ကွန်ရက်ကို iPhone တွင် အသုံးပြုခွင့် ပါဝင်မည်ဖြစ် ပါသည်။
Android ဟန်းဆက် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် 4G ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် System ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ပြုလုပ်စရာမလိုဘဲ Device Setting ထဲမှ 4G/LTE Service ကို ရွေးချယ်လိုက်ရုံဖြင့် အူရီဒူးမြန်မာ၏ 4G ကွန်ရက် ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ iOS အသုံးပြုသူများအတွက် Apple မှ အူရီဒူးမြန်မာ၏ 4G ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်မှစပြီး iPhone Version အချို့မှာ အူရီဒူးမြန်မာ၏ 4G ကွန်ရက်ကို စတင် အသုံးပြုခွင့် ရနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ Apple မှအူရီဒူးမြန်မာ၏ 4G ကွန်ရက်ကို နောက်ထပ်အဆင့်မြှင့်ပေးမည့် iOS Version တွင် တရားဝင်ထည့်သွင်းပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
iPhone5နှင့်အထက် အဆင့်မြင့် iPhone အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် iPhone7စတင်မိတ် ဆက်မည့် ရက်ဖြစ်သော ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ အတွင်းတွင်စတင်ပြီး အူရီဒူးမြန်မာ၏ 4G ကွန်ရက်ကိုတရားဝင် အသုံးပြု ခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။အူရီဒူးမြန်မာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “အိုင်ဖုန်း7ထွက်လာရင် အိုင်အိုအက်ဗားရှင်း10ထွက်လာမှာလေ၊ အဲဒီ အခါကြရင် အိုင်ဖုန်း5နဲ့ အထက်ဖုန်းတွေကို နိုတီလာပေးလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကို install လုပ်လိုက်ရုံပဲ၊ အဲဒါဆို အူရီ ဒူးဆက်ကတ်သုံးရင် 4G ရပြီ” ဟု ပြောသည်။
အူရီဒူးမြန်မာ၏ ဆင်းကတ်ကို iPhone ဟန်းဆက်နှင့်တွဲပြီး အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် iOS Upgrade အဆင် သင့်ဖြစ်သည့်အခါ သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင် update ပြုလုပ်ပြီး အူရီဒူး 4G သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် Apple ထံမှ Push Notification တစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
♪ အူရီဒူးဆင်းကတ်များမှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ *666# သို့ အခမဲ့ ခေါ်ဆိုကာ စစ်ဆေးနိုင်မည် ♫
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိတို့အသုံးပြုနေသော ဆင်းကတ်များအား သက်ဆိုင်ရာအော်ပရေတာ အသီးသီးနှင့် ဆက်သွယ်ကာ အသုံးပြုသူများ၏ မိုဘိုင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်ရေးအတွက် မှတ်ပုံတင်ထား ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသည့်ဆင်းကတ်များအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်မှစတင်ကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ယာယီရပ်စဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး စနစ်တကျမှတ်ပုံတင်ပြီးမှ သာပြန်လည်သုံးစွဲ ခွင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူလုံခြုံရေးကို ထိရောက်စွာအကာအကွယ် ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အူရီဒူး၊ MPT နှင့် တယ်လီနော ဆင်းကတ်များကို အသုံးပြုသူများအားလုံး ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အူရီဒူးအနေဖြင့် သုံးစွဲသူများ ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမည့်နည်းကို ၀န်ဆောင်မှုပေးထားပါသည်။ အူရီဒူးသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် *666# ကို နေ့စဉ် ၂၄ နာရီပတ်လုံး အခမဲ့ခေါ်ဆိုကာ မိမိ၏ဆင်းကတ်ကို မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူမှ မိမိ၏ ဆင်းကတ်သည် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက မိမိနှင့်အနီးဆုံး အူရီဒူးအမှတ်တံဆိပ်အရောင်းဆိုင် များသို့ သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (သို့မဟုတ်) ကျောင်းသားကတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် စသည့် သက်သေခံကတ်ပြား မိတ္တူတစ်ခုဖြင့် ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အူရီဒူး၏ Website link (သို့မဟုတ်) My Ooredoo Application ဖြင့် လွယ်ကူစွာ မှတ်ပုံတင်နိုင် ရန် နောင်တွင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည့် အစီအစဉ်များလည်းရှိပါသည်။ အဆိုပါ လွယ်ကူမြန်ဆန်သည့်နည်း စနစ်ဖြင့် ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အစီအစဉ်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အဆင့်သင့်ဖြစ် သည်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်း အူရီဒူးမှသုံးစွဲသူများထံသို့ အူရီဒူးမြန်မာမှ အကြောင်းကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဆင်းကတ်ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် SIM Pack ပေါ်ရှိ PIN No. နဲ့ PUK No. ကို မှတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဆင်းကတ်ပျောက်/ပျက်ခဲ့ပါက အဆိုပါနံပါတ်များကို တင်ပြခြင်းဖြင့် မိမိဆင်းကတ်ကို လွယ်ကူစွာပြန်လည်လျှောက်ထားရယူ ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဆင်းကတ်ဝယ်ယူသည့်အခါတွင် ဆင်းကတ်ချိုးပြီးနောက် SIM Pack ကို သိမ်းထားပြီး သုံးစွဲသူအနေဖြင့် မိမိဆင်းကတ်၏ PIN No. နှင့် PUK No. တို့ကိုသိရှိမှသာလျင် ပိုင်ဆိုင်မှုပိုမိုခိုင်မာနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ကတ်ပျောက်/ ကတ်ပျက်ဖြစ်လျင် အလွယ်တကူ ပြန်လည်သွားရောက် ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
♪ Huawei မှ Huawei Gold Touch ရွှေဒင်္ဂါးဆု ကံထူးရှင် ပထမအကြိမ် ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ် ♫
Huawei အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများကို ၀ယ်ယူအားပေးသူတိုင်းက Huawi Gold Touch ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှ ရွှေဒင်္ဂါးဆုများကို ကံစမ်းရယူနိုင်
Huawei Gold Touch ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှ ရွှေဒင်္ဂါးဆုကံထူးသူ (၂၅) ဦးပေါ်ထွက်ခဲ့
၂၀၁၆ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၉ရက်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ – နိုင်ငံတကာမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (ICT) ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Huawei” က Gold Touch ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာပလာဇာရှိ Huawei Branded Shop တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကံစမ်းမဲရွေးချယ်ပွဲကို Huawei ချစ်သူများနှင့် ဈေးဝယ်သူများရှေ့မှောက်တွင် မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင် မျိုးကိုကိုကျော်၊ Miss Myanmar Universe 2014 သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ၊ Huawei Device Myanmar ၏ Marketing Director Mr. Jeff Yang နှင့် စာနယ်ဇင်းကိုယ်စားပြု ကိုသန်းထိုက်အောင်နှင့် မနေနွယ်တို့မှ ကံထူးရှင် (၂၅) ဦးကို မဲနှိုက် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကံစမ်းမဲရွေးချယ်ပွဲအစီအစဉ်ကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရိုက်ကူးကာ Huawei Mobile Myanmar ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် “Live” ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။ ကံထူးရှင်စာရင်းကို Huawei Mobile Myanmar ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာနှင့် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။
Huawei ၏ Gold Touch ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများဖြစ်ကြသည့် P9 ၊ P9lite ၊ GR5 နှင့် GR5 Mini ဝယ်ယူသော သုံးစွဲသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ရွှေဒင်္ဂါးဆုများကို ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲကာလမှာ သြဂုတ်လ (၆) ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့အတွင်း ဖြစ်ပြီး P9 ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့် ကံစမ်းမဲကူပွန် (၂)စောင်ရရှိမည်ဖြစ်ကာ ကျန်သည့် P9lite၊ GR5၊ GR5 Mini တို့ကို ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့် ကံစမ်းမဲကူပွန် (၁) စောင်စီ ရရှိကာ အချက်အလက်များဖြည့်ပြီး ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်အပြင် P9 ကို ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့် Tripod နှင့် Selfie Stick တို့ ပါဝင်သည့် Photography Gift Package၊ P9lite ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့် Bluetooth Selfie Stick နှင့် GR5၊ GR5mini ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့်Gift Box စသည့် လက်ဆောင်များကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Huawei ၏ Gold Touch ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ Huawei Branded Shopများနှင့် Huawei နှင့် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဖုန်းဆိုင်တွေအပါအ၀င် ဆိုင်ပေါင်း (၅၀၀) ခန့်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Huawei Gold Touch ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ရှိရာဆိုင်များကို စုံစမ်းလိုလျှင် Huawei Mobile Myanmar ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်ရှိနေသော ကံစမ်းမဲများကို ၀ယ်ယူအားပေးသည့် ရက်စွဲများပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါ အတိုင်း ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ကံစမ်းမဲ (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့)
သြဂုတ်လ ၂၂ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာလ ၄ရက်နေ့အတွင်း ၀ယ်ယူသူများအတွက်
တတိယအကြိမ် ကံစမ်းမဲ (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့)
စက်တင်ဘာလ ၅ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့ အတွင်း ၀ယ်ယူသူများအတွက်
စတုတ္ထအကြိမ် ကံစမ်းမဲ (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့)
စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့ အတွင်း ၀ယ်ယူသူများအတွက် ကျန်ရှိနေသော ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကံစမ်းမဲတစ်ကြိမ်စီတွင် (၂၅) ဦးကို ဆက်လက်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကာ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို Huawei Mobile Myanmar ဖေ့စ်ဘွခ် စာမျက်နှာတွင် “တိုက်ရိုက်” ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ကံထူးသူများစာရင်းကို ကံစမ်းမဲဖွင့်သည့်နေ့တွင် Huawei Mobile Myanmar ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ရက်တွင် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များ၌ ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံထူးရှင်များအနေနှင့် ကံစမ်းမဲနှိုက်ပြီး (၁၄) ရက်အတွင်းတွင် မိမိဝယ်ယူခဲ့သော ဆိုင်တွင် ကံစမ်းမဲကူပွန်မူရင်းနဲ့အတူ မှတ်ပုံတင်ကိုပြပြီး ဆုထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်မှ လာရောက်ထုတ်ယူသူများကို နောက်တစ်ကြိမ်နှိုက်မည့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Huawei Gold Touch ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်အကြောင်းကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Hotline 01-9000900 ကို ခေါ်ဆိုမေးမြန်းခြင်း (သို့) Huawei Mobile Myanmar ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာ (www.facebook.com/HuaweiDeviceMyanmar) တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၆ Huawei Gold Touch ကံစမ်းမဲအနိုင်ရရှိသူများ
ကိုဆန်နီအောင် မဝေေ၀ ဦးမင်းဦး
ကိုမျိုးမင်းထွန်း ကိုဇော်ဝင်းမောင် ကိုပြည့်ဖြိုးဦး
မယမုံ မခင်နှင်းနှင်းသက် ကိုညွှန့်ဆန်းဝင်း
ကိုကျော်စွာမြင့် ဦးသာထွန်း ကိုသီဟ
ဒေါ်သင်းသင်းဌေး ကိုဇာနည်စိုး မချိုလဲ့ခင်
ကိုကျော်မျိုး ကိုဟန်စိုး ကိုမျိုးလွင်
ကိုထွန်းထွန်း မခိုင်ယဉ်ဖြိုး မောင်ဇင်ထက်အောင်
ကိုဇော်မျိုးထက် မနွေးနွေးထွန်း ကိုတရုတ်ကြီး
♪ စက်တင်ဘာ၁ရက်နေ့ပွဲမှာ Mate စီးရီးဖုန်းသစ်လာဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ Huawei ဆို ♫
လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့မှာ Huawei ဟာ ပွဲသစ်တစ်ခုပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး စမတ်ဖုန်းသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ကြေငြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Mate 8 ကိုဆက်ခံမယ့် ဖုန်းသစ်ကို ထုတ်လုပ်ဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Huawei ကုမ္ပဏီအရာရှိတစ်ဦးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ Mate စီးရီး စမတ်ဖုန်းကို အဲ့ဒီပွဲမှာ ထုတ်ဖော်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အရာရှိရဲ့ အတည်ပြုပြောကြားချက်အရ ဒီပွဲမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းစီးရီးတွေထဲက တစ်မျိုးကို တရားဝင်ထုတ်ဖော်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Mate စီးရီးကိုတော့ လာမယ့် နှစ်လဝန်းကျင်အတွင်းမှာ တရားဝင်ထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ဆိုပါတယ်။
မကြာသေးမီက ထွက်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ သတင်းတွေအရ ဆိုရင် Huawei အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ရည်ရွယ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကို လာမယ့်လမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် IFA ပွဲမှာ ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းအမျိုးအစားနဲ့ နာမည်ကိုတော့ မဖော်ပြထားပဲ ဖုန်းရဲ့ ဓာတ်ပုံတော့ ပေါက်ကြားလာခဲ့တာပါ။
♪ Galaxy Note7ဖုန်းကို ရေထဲထည့်ခဲပြီး ပေတစ်ရာအမြှင့်ကနေပစ်ချတဲ့ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ ♫
သင့်ရဲ့ Samsung Galaxy Note7ဖုန်းသစ်ရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို စမ်းသပ်ပြီးပါပြီလား? ဈေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းမို့လို မစမ်းသပ်ရဲဘူးဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ YouTube က ဖုန်းနဲ့ တက်ဘလက်တွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို စမ်းသပ်တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ဗီဒီယိုကိုသင့်အနေနဲ့ ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ စမ်းသပ်မှုဟာ Galaxy ဖုန်းတွေကို သာမန် ရေထဲမှာထည့်ပြီး စိမ်ပြတဲ့ စမ်းသပ်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲ တကယ့်ကို အကြမ်းပတမ်းနဲ့ စမ်းတဲ့ စမ်းသပ်ပြကွက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတစ်ခါစမ်းသပ်မှုမှာလည်း Galaxy Note7ဖုန်းရဲ့ ရေစိမ်ခံတဲ့စွမ်းရည်ကိုသာမက အကြမ်းပတမ်းခံနိုင်တာကိုပါ စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။ အရင်ဆုံး Galaxy Note7ကိုရေအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ ဇလုံတစ်ခုထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ရေဇလုံကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့် ခဲလိုက်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဖုန်းကတော့ ပျက်ပြီဆိုပြီး ထင်စရာရှိခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။
ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီး ၆နာရီအကြာ ရေအတော်လေးခဲလာတဲ့အခါမှာ ဖုန်းဟာ မျက်နှာပြင်မီးရောင်ဖျော့ဖျော့လင်းပြီး စခရင်က လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ App တွေထဲဝင်တာတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဘက်ထရီကတော့ အလုပ်လုပ်နေဆဲပါပဲ။အဲ့ဒီနောက် ၂၃နာရီကြာရေခဲထားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဘက်ထရီဟာ လုံးဝ “၀%” အနေအထား ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းလဲရေခဲထဲမှာ လုံးဝ ပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဖွဲ့ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်ဟာ မပြီးဆုံးသေးပဲ Note7ဖုန်းပါဝင်နေတဲ့ ရေခဲတုံးကြီးကို ပေတစ်ရာ အမြင့်ရှိတဲ့ တိုက်ပေါ်ယူဆောင်ကာ အပေါ်ကနေ ပစ်ချခဲ့တာပါ။ ရေခဲတွေလဲ အစိတ်စိတ်၊ အမွှာမွှာကွဲပြန့်သွားပြီး ဖုန်းလဲလွင့်စင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းကတော့ လုံးဝပျက်သွားပြီလို့ ထင်ခဲ့ရပေမယ့် Note7ကတော့ ဘယ်လိုမှ မနေခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒီနောက် ဖုန်းကိုအားပြန်သွင်းပြီး ပါဝါဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ နဂိုအတိုင်း အလုပ်လုပ်တာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုစမ်းသပ်ချက်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး နဂိုအတိုင်းအလုပ်လုပ်တာဟာ Samsung ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Root Tool တွေထဲမှာအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အချို့ Root ခက်ခဲတဲ့အလုံးတွေကိုပေါက်စေတဲ့ Kingo Root Tool လေး version အသစ်နဲ့ထပ်မံထွက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။ဒီ version မှာဆိုရင် Samsung ဖုန်းတွေ Root ဖောက်တဲ့အခါမှာ normal mode နဲ့Tool ကနေဖောက်ပေးနေပေမဲ့ normal mode မှာမပေါက်ရင် Download mode ထိဝင်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဖိုင်ကို auto ထည့်သွင်းကာ Root ပြုလုပ်ပေးစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ versionကတော့ 1.4.8 ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သူများရယူနိုင်ရန် Kingo Root Tool ရဲ့တိုက်ရိုက်လင့်ကိုတင်ပေးထားပါတယ်။ Window အတွက်လိုလို Android အတွက်လိုလိုဝင်ယူနိုင်ပါ တယ်။
အမျိုးအစား: Android Root Tool , Root Tools
Android ဖုန်းတွေအတွက် Batteryစိုးရိမ်ရသူတွေသုံးထားကြ - Power Doctor - Saver Pro v2.2.09 APK
Android ဖုန်းတွေ အတွက် Battery ကို saving အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Application နောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ Background တွေကိုလည်း cleaning လုပ်ပေးပါတယ်။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ switch ကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသေတယ်။ မိမိ ဖုန်းထဲကို install လုပ်နေတဲ့ APP တွေကိုလည်း ရှင်းလင်းအောင် လုပ်ပေးတတ်တဲ့ Application ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ status bar ပေါ်က Power icon style ကိုလည်း ကြိုက်သလိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ Themes များပါလာတာကိုလည်းတွေရပါတယ်။ အသုံးပြုသူများအတွက်ကတော့ Android OS 3.0 အထက်ရှိဖုန်းများအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖိုဒ်ကတော့ 5.32 MB ပဲရှိပါတယ်။
အမျိုးအစား: Android Battery Apk , Android applications
စာအုပ်အမည် - ကြက်ခြေခတ် နှစ်ခု
စာရေးသူ - တာရာမင်းဝေ၊ ဝေမှူးသွင်
ဖိုင်ဆိုဒ် - 6.81MB
စာအုပ်အမည် - ဟာသ ဆိုသည်မှာ
စာရေးသူ - ဗျူး
ဖိုင်ဆိုဒ် - 44.6MB
Android device ကနေ ပြက္ခဒိန်အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက် Shwe Myanmar Calendar apk လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ apk လေးမှာ ခုနှစ်တွေအများကြီးပါဝင်ပြီး မြန်မာသက္ကရာဇ် နဲ့ အင်္ဂလိပ် ခုနှစ်တို့ကိုတွဲပြီးဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရက်ရာဇာ / ပြသဒါးတွေအပြင် ထူးခြားသောရက်များကိုပါဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ရက် တစ်ရက်ချင်းစီကိုလည်း အသေးစိတ်ကို လည်း ထောက်ပြီးအသေးစိတ်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။apk လေးကိုလိုအပ်ရင်တော့ ရယူလိုက်ပါ။
Download on Other Link
Android ဖုန်းတွေအတွက် USB Driver For Android ဆိုတဲ့ apk လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ apk လေးကတော့ Window XP , Vista ,7, 8 ( x86 and x64 ) တို့နဲ့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ Window မှာ run ရန် Driver ကိုဖုန်းကနေပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်မဲ့ apk လေးဖြစ်ပါတယ်။ apk လေးကို install လုပ်ပြီး apk ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ Model နေရာမှာမိမိရဲ့ဖုန်း model ပေါ်နေပြီး အပေါ်မှာ EXTRACT ဆိုတဲ့အဝိုင်းလေးပေါ်နေပါမယ်။ EXTRACT ကိုနှိပ်ပြီးခဏလောက်စောင့်လို့ Done ပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ ဖုန်းရဲ့ internal memory ထဲကိုမိမိရဲ့ဖုန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ driver ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ internal memory ထဲက driver ကို sd card ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုထဲသို့ကူးယူကာ Window မှာပြန် run ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။ apk လေးကိုလိုအပ်ရင်တော့ Google Play Store မှရယူနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: Android Application , Android Drivers